Sheeko Jaceyl: U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 22aad - Ceelhuur Online
Home > SHEEKOOYIN > Sheeko Jaceyl: U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 22aad
July 6, 2018 admin681
Waxay fiqfiqleysaba, oo shaarkii Yuusuf garabkiisa diif iyo oohin ku qubtaba, si kedis ah bay inta usoo jeesatay, Yuusuf wajigiisii u eegtay sidii in aysan waligeed arag. Waa aamini la’dahay in uu Yuusuf halkaan ugu yimid. Mudo dheer bay is moogaayeen. Intii ay guriga Nimco joogtay war uma uusan ahayn. Dhibkii ay Ree Xiirane u geysteenna kama uusan warqabin. Maanta waxay rabtaa in ay uga sheekeyso wixii soo maray. Waxay rabi lahayd in uusan ka tegin, oo uu la seexdo caawa si ay u weheshato, sheekadiisana uga dhurto.
Yuusuf sidii lagu yiqiinay markuu Muno arko uma daldalmayee, aamusnaan baa kasoo hartay.
Muno halka ay joogto sida ay u egtahay, iyo iyada muuqaalkeedaba aad bay uga duwanyihiin sidii uu ku ogaa.
Malaha boholyowga arinteeda baa hurda quman u diidaye, basaaska ka muuqda laba jeer baa la eegayaa si loo hubiyo in qoftu Muno tahay.
Macluusha ka muuqata, Yuusuf wuxuu garanweysanyahay sida ay awalba iyadoo dhuubnayd ay hadana usii caatowday. Nafaqadarada ka muuqata, midabkeedii waa dilmay, da’deediina wax baa ku darmay.
Geedka guriga Nimco ku dhex yaalla dabayshiisa, iyo jiingadda ay seexato habeenkii qabowgeeda baa cagihii la jeexjeexmeen, faruuryihiina la qalaleen, oo dillaac wac yiraahdeen, mar ay damacday in ay Yuusuf u dhoola cadayso.
Arradka haya, dharka ay xirantahay dhamaadkooda iyo tifankooda waxaad moodaa in ay u xiratay in ay guriga kaga shaqayso, uusan labiskeedii dhamaaba ahayn.
Yuusuf hadal meel uu ka bilaabo buu garan la’yahay. Mar wuxuu eegaa nimanka iyo naagaha caariyaalka ah, ee sida xerataraarka ah, isku bar barkan. Mar wuxuu eegaa caruurta dhowrka ah ee iyagoo qaawan guriga dhexdiisa is cayrcayrsanaya, qaarkoodna ay meeshay doonaan isaga kaadshayaan. Mar wuxuu eegaa Muno, oo damcaa in uu la hadlo, laakiin wuxuu is arkaa isagoo guriga la yaabka leh, mashaqadiisa ka fekerkooda, dhexda kaga jira.
Cabaar markii uu deydka dhex taagnaa, buu yiri, “Muno, abaayo meel dadka ka dheer oon ku sheekeysanno ma jirtaa?”. “Qolkaas na gee, inkastoo gabdhuhu ay iska soo galaan markay doonaan” bay ugu jawaabtay, oo inta hogaamisay qol shiirka kasoo baxaya la moodo in wax yar ka hor ay labaatan qofood hurdo kaga soo kaceen dhex geysay.
Inta gudbay buu damcay in uu daaqadaha furo, Munaase inta ku booday, daaqadii uu furi rabay sideedii u xirtay. “Aboowe ciyaal baa tuuryo iyo caay nafta noogu keenay haddii la furo, ee naga dhaaf” bay ku tiri oo dhowr joodari oo dhulka ku goglanaa inta qaaday, albaabka laabkiisa ku tiirisay. Salli caag ah, oo dhamaad dartiis, guriga shamiitadiisa dhulka ah looga dhexjeedo bay inta jaftay tiri “na fadhisii halkaan aboowe”.
Labadoodiiba waxay soo baraarugeen mar ay cabaar iyagoo aamusan is daawanayeen.
Yuusuf baa hadalkii bilaaboo yiri “Muno malaha war waadba ii haysaahe, soo daa warkaaga”. Muno oo naabta afkeeda saaran aad is leedahay tabar ay ku sheekeyso maba hayso, baa afkii furatoo arintii ku dhacday, iyo wixii Ree Xiirane kala qabsaday isu daba qabatay.
Yuusuf inkastuu sheekadaan ka dheregsanaa ooy Mulki usoo sheegtay, hadana yaab horleh bay ku noqotay markuu Muno afkeedii ka maqlay. “Alla reerku indha adkaa” buu dhowr jeer yiri, isagoo xanaaqa haya in uu dhidido bilaabay.
Cabaar markii ay sheekeysteen buu Yuusuf weydiiyay sababta ay reerkeeda ugu diidantahay in ay ogaadaan halka ay joogto. Waxay u sheegtay in ay ka xuntahay in ay waalidkeed welweliso, hase ahaatee ay ku qasbantahay in ay halka ay joogto qariso sababtoo ah, Ree Xiirane oo in aanan gabar laga qarinayn loo sheegay, baa wixii loo sheegay beenoobayaan. Yuusuf aad buu ula yaabay gabadha iyadoo dhibkaan ku jirta, hadana waalidkeed in ay danbaabaan ka ilaalinaysa. Kartideeda, dadnimadeeda iyo Alla ka cabsigeeda markuu eegaba, jacaylkii uu u hayay waa sii toban jibaarmaa.
Wuxuu u sheegay in howshaan aysan soconayn, uu isagu gurigooda geyn doono. Waa ka diiday oo u sheegtay in Ree Xiirane iyo reerkoodu uu u yaalo xeer aad u adag, in la dhuunto maahane aysan si kale ku badbaadi karin.
Waxay fikir kasta uu soo jeediyo ay ka diidaba, waxay ka ogolaatay in uu usbuuc kadib Barre u sheego in ay is arkeen, laakiin uusan u sheegi karin halka ay joogto. Fikirkaas wuu ka aqbalay kana soo tagay iyadoo sidii in aanan loosoo laaban doonin u ooyaysa. Inta kusoo jeestay buu maslaxay, oo u sheegay in uu galab kasta u imaan doono.
Caawoo kale waxaa socota ciyaar xiiso badan, oo tartanka kubadda cagta Yurub ah. Dhalinyarada xaafadda aad bay caawoo kale u sugaan, oo buuqooda iyo kaftankooda baa magaalada oo dhan gees ka gees is qabsada. Yuusuf sidiisii inta labistay shaleemada banoonigu uu ka socdo, xilli hore, si uu kursi fiican u helo uma sii tagine, qolkiisa buu welwel la fadhiyaa. Waxaa u cuntami la’ in gacalisadiisa ay dhibkuu soo arkay ku jirto isna uu tamashlayn iska galo.
Caawa iyo beriba waxay ula dheeraadeen sidii qof ciqaabi ku socoto. Wuxuu sugi weysanyahay inta beri galab iskuulka laga soo deynayo. Wuxuu sugi weysanyahay inta uu Muno uga laabanayo, una soo madadaalinayo. Caawa wuxuu seexday isagoo indha fiiqfiiqan, oo hurdo aysan hayn. intii dadku habeenkaas ay hurdayeenna, ugu yaraan lix goor qaraw waa lasoo toosay. Markastaba, guriga Nimco silica gabadha ku haysta welwelkiisa baa hurdada ka jafayay.
Ardada Yuusuf iskuulka la dhigata, Muumin kaliya baa darawal ka ah, oo gaari adeerkiis leeyahay marmar iskuulka ku yimaada. Muumin iyo Yuusuf inkastoo iskuulka kaliya ay isku arkaan, hadana aad bay isugu baxdaa, oo isu sheeko fahmaan, labadooduna aad bay ugu faraxsanyihiin in ay in mudo ah hadeer safka hore ee fasalka wada fadhiistaan.
Yuusuf isagoo ka xishoonaya in uu saaxiibkiis wax weydiisto, buu inta gees Muumin ula baxay weydiistay in uu galabta gaariga u keeni karo. Muumin oo Yuusuf xishoodkiisa la yaaban baa u sheegay “war Yuusuf ma anigaad hadeer gaari iga baryaysaa? In aad keen igu amarto bay ahayd”. Muumin wuxuu u sheegay in uu galabta xiliga uu rabo uu gaariga gurigooda ugu keeni doono. Yuusuf oo Muno u tagisteeda galabta aad moodo in ay farxad xoog leh galiyay, baa markuu gambaleelkii ugu danbeeyay fasalada uu yeeray banaanka ku dhacay, oo isagoon gurigoodiiba aadin tukaan xaafadda ku yiilay toos u aaday.
Tukaanka reerkooda baa saaran, oo biilka ka qaata, waxkasta oo deyn ah ooy rabaanna siiya. Yuusuf isagu ma shaqeeyo, lacagna ma haysto, laakiin wuxuu isku halaynayaa saaxiibkiis Barre in uu lacagta kasoo qaado. Tukaankii alaabtii uu ka codsaday wuu siiyay, isna, inta isku duwday buu gurigoodii ka aaday, oo u sheegay in uu galabta soo doonanayo.
Markiiba Muumin buu wacay, una sheegay in uu saacad kadib gurigooda uu u tilaamay, ugu yimaado, qubays iyo qadana iska galay.
Yuusuf oo inta mar hore labistay, hadba saacadiisa eegaya, oo gurigoodii hortaagan buu Muumin soo hor istaagay “saaxiib makugu soo daahay?” buu yiri Muumin. “Maya saxib anigaa iskay isaga degdegsan, ee adigu waadba soo hor martay” buu Yuusufna ku jawaabay, oo inta gaarigii ku booday dhankii tukaanka farta ugu fiiqay.
Joodari, go’, barkin, dhowr joog oo baati ah, googarado, kareemooyin, shanlo, saliid, dacas, todobo buug iyo laba qalin iyo salli salaad buu gaarigii soo saaray, oo u sheegay Muumin un uu Boondheere u dhigo.
Waa labadii duhurnimo iyo rubuc. Magaaladoo dhan waa cidloo dadku inta qadeeyeen bay iska wada seexdeen. Labadoodii oo wirwir ah baa gurigii Nimco sii hor istaagay. Yuusuf wuu iska fasaxay Muumin markuu alaabtii la dejiyay, maadaama uu rabo in uu galabtoo dhan Muno la joogo.
Muno qolkeedii bay ku jirtaa, dhowr gabdhood oo xaloo dhan wax xil leh kusoo jeeday baa ag quurinaya. Buuqa banaanka iyo Yuusuf hadalkiisii baa hurdada kasoo kiciyay. Iyadoo ganmaysa bay banaanka bul usoo tiri, oo Yuusuf isku duubtay sidii in aysan laba bilood arag. Ninkii shalay galab oo dhan la joogayba ma ahan! Malaha cidlada iyo caajiska Muno haya faraweynaa! Alaabtii bay banaanka ku tiirisay, una sheegtay in qolka saacaan oo kale aanan la gali karin. Salligii salaadda uu Yuusuf hadeer keenay bay guriga deydkiisa meel geedku hoos ka dhigay dhigteen oo sheeko bilaabeen.
Yuusuf wuxuu rabi lahaa in uu Muno meeshaan ka kaxeeyo. Wuu u heli karaa guri midkaan dhaama, laakiin Muno oo Nimco ka xishoonaysa, in meeshaan aanan laga soo raadinayna og baa ka diiday, una sheegtay in mar dhaw, Alle idinkiis, howshoodu soo gaba gaboon doonto.
Inta cashar oo ka baaqatay intii ay iskuulka ka maqnayd, oo uu soo sawiray buu siiyay, una sheegay in uu galab kasta u imaan doono, casharada cusubna ay ka daalacan doonto. Wuxuu bilaabay in uu casharada ugu celiyo, waxna ka su’aalo. Markii cashar aqriskii ay dhameeyeen buu weydiiyay, halka ay wax marayaan iyo waxa ay damacsantahay, illeen waligeed gurigaan ma joogi doontee, Ree Xiiranana dad samraya uma ekee.
Muno su’aalahaan inta uusan Yuusuf weydiin bay iyadu is weydiinaysay. Jawaab cadna ma hayso, laakiin waxay taagantahay heer aad u xun, rabtaana in ay si uun yeesho.
“Wallaahi ma aqaan aboowe, bal dhowr usbuuc oo kale aan aragno sida ay wax noqdaan” bay tiri iyadoo rajo beel la neefneefsanaysa.
Yuusuf madaxiisa waxaa ka guuxaya, dhowr fikradood oo uu ka baqayo haduu Muno u sheego in ay la yaabto. Wuxuu ku fekerayaa in uu inta Ree Xiirane u tago ku yiraahdo ii dhaafa gabadha. Markuu xaqiiqsado in aysan hadalkaas ka aqrisanayn, buu hadana kuu fekeraa in uu aabihiis ka codsado in Muno loo doono, laakiin wuxuu ogyahay in uusan aabihiis, xiligaan guur ka aqbali doonin, isagoon inta waxbartay, hadana aanan shaqo helin.
Isaga laftiisu markuu cabaar fekeraba, rajo beel buu la neefneefsadaa. Muno oo la hadlaysa isna uu u egyahay qof dhagaysanaya buu kaligiis si walbahaar leh u fekerayaa “Alla calool xumo weynaa! Dhaqan xun oo gabdhaha dookhooda aanan la qiimaynayn baa dhibkaan Muno ugu wacan, Alla Ree Xiirane ad adkaa oo naxariis daranaa! in ay gabadha helaan iyo in gabadha la waayo wax u dhaxeeya ma lahan agtooda”.
Maqribkii markuu soo dhawaaday buuy Yuusuf inta jafjaftay bilaabay in uu kabihiisii ilado. Muno, oo galabta aad u faraxsan, waqtiga uu Yuusuf la qaatayna aad moodo in ay nafis ka heshay, baa si welwel la’aan ah, iyadoo wajigeedu farxad la ifayo tiri “haye macaane, waa inoo berri galab insha Allah. Aad baad ugu mahadsantahay alaabta aad ii keentay, oon runtii aad ugu baahnaa iyo waqtiga muhiimka ah eed ila qaadatay, ajar Allaha kaa siiyo”. Yuusuf oo daanka kasii dhunkanaya baa u sheegay “dad is jecel waa qalad in ay isku mahadceliyaan. Wax kasta oon kuu keenay waan ku qasbanaa, oo xaq baad iigu leedahay, aad baana uga xumahay in aan kaasoo daahay” buu isna ku war celiyay.
Iyagoo midba midka kale uu amaanayo buu Yuusuf albaabkii kasoo degay, oo jidka laba kasoo dhigay.
Ree Xiirane quus bay ka taaganyihiin in ay Muno helaan. Cabdi Xiirane sidii uu guriga Ree Sandhool u imaanayay, marna uu u hor fadhiisanayay isagoo gaari muraayado mugdi ah saaran oonan loo jeedin buu maanta go’aansaday in uu sheeko cusub la yimaado. Shamso buu inta u yeeray u sheegay in uu Ciise qolka fadhiga ugu yimaado. Ciise oo waayahan danbe aabihiis la sheekeysigiisa bilaabay in uu dhibsado, isaga laftiisana markaan in uu Muno ka samro doonaya baa odagii u tagay.
“Ciise, waad aragtaayoo Muno waa la weysanyahay. Reerkoodiina meel ay joogto ma garanayaan. Inaguna gurigooda uma sii socon karnee, sideen kaloo wax yeelnaa?” buu oday Xiirane weydiiyay wiilkiisii. Ciise mar uu is leeyahay aabe hadduu talo ku weydiistay u sheeg in Muno la iska daayo, hadalkaas sheegistiisana ka baqaya in odagu kula xanaaqo, oo wali aanan afkiisii furin buu odagii inta hadalkii dafay yiri “wiilka ay wada socdaan halkee daganyahay?”
Ciise oo odagu waxa uu damacsanyahay ka baqaya baa yiri “haa, Yuusuf xaafadda Albarako buu daganyahay”. Cabdi Xiirane, oo markaan inta kor usoo fadhiistay garkiisa xogaya baa yiri “Yuusuf waa qasab in uu ogyahay gabadha halka ay ku dhuumanayso. Waa in aan isaga daba kacnaa, isagaa nooba geyn doonee halka ay joogto”. Ciise oo markaan aad hadalkaan uga naxay kana shalaysan in uuba markii hore aabihiis gabadhaan ii doon yiri, odagana war aanan kusoo celin karin baa ogolaaday.
Ree Xiirane waxay go’aansadeen in galabtaba Yuusuf la daba galo. waxay soo kireesteen Suudi Carabeey, oo ah nin dadka ugu sheekeeya in uu dowladdii Jaalle Siyaad Barre jaajuus ahaan jiray, oo u sheegeen in uu wiilkaas meesha uu tago uu soo ogaado.
Waa sadexdii galabnimo, Yuusuf oo labisan, buugaagtii uu Muno casharada uga soo dhigi lahaana sita baa gurigoodii bul kasoo yiri. Carabeey oo maanta kowdii duhurnimo guriga Yuusuf meel cabaar u jirta gaari muraaydo madaw leh soo dhigtay, baa markuu Yuusuf u jeeday kasoo daba dhaqaaqay.
Sida uu Carabeey filanayay Yuusuf gaari ma wato, oo qorshihiisu waa in uu galab kasta lug ku tagaa Boondheere maadaama uusan alaab culus sidin. Carabeey markuu cabaar gaarigii qof socda xawaarihiis ku waday bay u cadaatay in uusan sidaan Yuusuf illaa iyo Boondheere u daba taagnaan karin, oo la arki doono. Inta gaarigii meel iska dhigay buu lug isna ku daba galay.
Yuusuf sida lagu yaqaano wuu socod dheereynayaa. Wuxuu rabaa in uu sodon daqiiqo gudahood ku tago Boondheere, si uu waqti fiican ula soo qaato Muno. Gadaashiisa ma eegayo, oo in lasoo dabagalo, sidii galabkii hore uu isaga ilaalinayay, galabta isagama ilaalinayo.
Markuu Degmada Hodan inta kasoo baxay, Howlwadaagna Bakaaraha ka marayo, buu isagoo meel buuq ka taaganyahay eegaya, isha ku dhuftay Carabeey oo kasoo daba hilif hilif leh. Shakise ma galine wuu iska sii socday. Dhowr daqiiqo kaliya kadib buu xaafaddii Boondheere dalakh yiri isagoo xawaaraha uu ku socdo, ay ku qasabtay Carabeey in uu daal carrabka laa laadiyo, dhowr jeerna kasoo ordi siisay markuu arkay Yuusuf oo ka mirqi raba.
Gurigii Nimco waa muuqdaa. Ugu badnaan hal daqiiqo baa uga harsan inta uu albaabka ka galayo, Carabeeyna wuu ka daba nabanyahay, oo isaga laftiisu guriga Nimco ishiisu waa gaartaa.
LA SOCO QEYBTA 23AAD
Tagged burhaan burhaan jaceyl muno sheeko jaceyl u gabara deegaan dhan w/q waxaa qorey
Ciidamada millatariga Soomaaliya oo howlgallo ka sameeyay gobolke Gedo
Xil:C/qaadir”Cosoble wixii Xalay Dhacay lama aqbali karo”
December 18, 2017 Cali Yare